Kedu nhọrọ kachasị mma maka redlinks homepage m?
A na-akpọkarị backlinks site na mkparịta ụka ebe obibi dị ka grail dị nsọ nke echiche oge a nke Search Engine Optimization. Echere m na azụlinks nke ebe obibi bụ akụkụ ndị dị mkpa nke ebe nrụọrụ weebụ gị na-enwewanye ikike na-eto eto, nakwa dị ka ewu ewu na nsonaazụ ọchụchọ Google. Kedu ihe azụmazụ dị na gburugburu ụwa site na nkọwa? Site na echiche nke SEO, backlink bụ njikọ na-apụta site na saịtị ọzọ na-egosi na ebe nrụọrụ weebụ gị. The homepage bụ isi (mbụ) peeji nke gị na ebe nrụọrụ weebụ. Nkọwa - na-anọchite anya ebe ọ na-etinye ihe dị n'ime ihe, ọ dịghị spam ma ọ bụ ebe a na-edeba aha - web development companies lebanon beirut.
Nke a bụ ihe ole na ole ị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-arụghachi azụlinks homepage:
hụ na ha dị mma, dịka ya na ndị ọzọ njikọ;
zere ịkpasu esemokwu nke Google, emela ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ndị a dị ike;
na-elekwasị anya na ahụmịhe nchọgharị na-eme nchọgharị, jiri nlezianya lebara anya na ọdịnaya gị;
na-echekwa nkwụnye aka kwesịrị ekwesị n'etiti netwọk ụlọ gị na ihe ndị ọzọ SEO dịka iji ya eme ihe n'ụzọ dị mkpa nke isi isiokwu gị, isi nyochaa mmemme onye ọrụ na-emegharị, yana dị ka ihe dị mkpa nye ndị na-ege ntị na ndị ọrụ ndụ.
Gini mere o ji bụrụ ihe dị ike na redlinks homepage?
Ọ na-abịa na-enweghị ikwu na ọ bụla backlink na ebe nrụọrụ weebụ nke homepage bụ mgbe niile dị irè karịa ọ bụla njikọ. Otú ọ dị, buru n'uche na àgwà nke backlinks gị esiteghi na site n'ịdị na-ama ewu ewu na ebe nrụọrụ weebụ ha. M na-ekwu na ọ bụ otu ihe dị mkpa na-enwekarị mmasị na ibe ọ bụla ma ọ bụ na a ga-agụkwa ya mgbe niile. N'ụzọ dị otú a, ya bụ, ebe obibi bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe kachasị ewu ewu na ihe ọ bụla e nyere na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla, naanị n'ihi na ọ ga-abụkarị onye nleta ọ bụla ga-akwụ ya nleta.
Olee otu esi enweta ha?
N'ileba anya na mkpa nke backlinks site na gburugburu ebe obibi, ka anyị gbalịa ịchọta ihe kacha mma iji nweta ha. Mbụ, ị nwere ike ịrịọ ha ozugbo - ma ọ bụ na-eche ihu ọrụ siri ike iji nye akwa ọdịnaya dị oke ike ịbanye na ya nanị, ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ buru ibu dị mkpa iji mee ihe gbasara nkwado azụmazụ kachasị mma nke aghaghị ịbụ nchekwa.
Nyere na ị nwere ihe dị ike nke ukwuu, ị nwere ike ịchọta inwe obi ụtọ iji nweta àgwà na backlinks dị ike n'ezie.Ọ bụ ezie na, ọtụtụ mgbe, ọ gaghị enwe ike ịme ka i wee nweta ha niile site na ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma na ikike kachasị dị elu na ọkwa ogo ogo dị elu.Ya mere, gịnị ka a ga-eme ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị adịghị adịrịrị ama ama? Ka anyị were ya - mgbe mbụ ị na - agbalị imeziwanye usoro njikọ njikọ gị (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ metụtara SEO site na saịtị, ọ bụghị iji kọwaa njikwa azụmazụ nke ụlọ gị) bụ ịkwụ ụgwọ onye ọrụ.
N'ezie, usoro a nwere ike ọ gaghị abụkarị onye edozi ikike site na onye ọ bụla na-eme onwe ya, ọ bụrụgodị na ọ bụ onye na-elekọta webmaster maara nke ọma. Echere m na iji rụọ ọrụ nke ọma, a na-atụ aro ka gị na ụfọdụ ụmụ okorobịa na-arụsi ọrụ ike jikọtara ụwa SEO maka afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụ ya mere m ji kwere na nhọrọ kacha mma maka redlinks gị bụ ụlọ ọrụ ndị ọkachamara, bụ ndị maara ihe niile gbasara na isiokwu ahụ, ma ha nwere ma ọ bụ kọntaktị ha ma ọ bụ ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ onwe ha nwere ngalaba ikike kachasị iji jikọta saịtị gị.